को को हुन् त १६ नपुग्दै कुमारित्व गुमाउने सेलिब्रेटीहरु (यो पढ्नुहोस्) | Jukson
को को हुन् त १६ नपुग्दै कुमारित्व गुमाउने सेलिब्रेटीहरु (यो पढ्नुहोस्)
जक्सन डटकम । १८ वर्ष नपुग्दासम्म शारिरीक रुपमा मानिस परिपक्व नभएको मानिन्छ । उमेर पुगेका व्यक्तिले १८ वर्षमूनिका व्यक्तिसँग मिलोमतोकै आधारमा शारिरीक सम्पर्क राखेपनि कतिपय मूलुकमा कडा कानूनी कारबाही व्यहोर्नुपर्छ । तर यस्ता अनेकन कानूनी, शारिरीक तथा नैतिक बन्धन तोड्दै यौनसम्पर्क राख्नेहरुको समाजमा कमी छैन् । १६ नपुग्दै यौनको अनुभव लिने विश्वचर्चित केही सेलिब्रेटीहरुको नामावली यस्तो छ । आखिर मन मिलेपछि के–को छेकवार ?
१. रणवीर कपूर :
भारतीय समाजमा यौनले ठूलो चर्चा पाउँछ । तर चर्चित नायक रणवीर कपूर यौनका सम्बन्धमा खुला देखिएका छन् । ऋषि कपूरका छोरा रणवीरले एक म्यागेजीनलाई अन्तरवार्ता दिदाँ १५ वर्षकै उमेरमा त्यतिबेलाकी प्रेमिकासँग यौनसम्पर्क राखेको बताएका थिए ।
२. सनी लियोन :
सनी लियोन अर्थात पूर्व पोर्न स्टार । अहिले बलिउडमा चर्चामा रहेकी सनी लियोनले १६ वर्षको उमेरमै एक बास्केटबल खेलाडीसँग आफ्नो भर्जिनिटी गुमाएकी थिइन् । उनले ११ वर्षको उमेरमै एक युवासँग टङ किस गर्न भ्याइसकेकी थिइन् ।
३. एन्जेलिना जोली :
हलिउड अभिनेत्री एन्जेलिन जोली ४० वर्षकी भइन् । उनी पछिल्लो समय यौन हिंसा रोक्ने अभियानमा छिन् । तर उनले आफैँ १४ वर्षको उमेरमै यौन सम्पर्क राखेकी थिइन्, तत्कालिन ब्वाईफ्रेन्डसँग । उनीहरु त्यतिबेला प्रेममा थिए । अहिले भने जोलीले थुप्रैसँग रोमान्स गर्न भ्याइसकेकी छिन् ।
४. किम कार्दसियन :
पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेकी हलिउड अभिनेत्री किम कार्दसियनले १४ वर्षकै उमेर भर्जिनिटी गुमाएकी थिइन् । उनले माइकल ज्याक्सनका भतिजा टेजे ज्याक्सनसँग यौनसम्पर्क राखेकी थिइन् । दुईबीच किशोरावस्थामा प्रेम थियो ।
५. कोल कार्दसियन :
अमेरिकाकी चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता कोल कार्दसियनले पनि १४ वर्षकै उमेरमा आफ्नो भर्जिनिटी गुमाइन् । छोरीको चर्तिकला थाहा पाएपछि उनका बाबु निकै रिसाएका थिए ।
६ डेनियल रेडक्लिफ :
चर्चित हलिउड अभिनेता डेनियल रेडक्लिफेले १६ वर्षै उमेरमा भर्जिनिटी गुमाए । उनले आफूभन्दा निकै जेठी महिलासँग यौनसम्पर्क राखेका थिए । रेडक्लिफेले निकै जेठी महिलासँग सम्बन्ध राख्दाको क्षण संझदा उल्टो पश्चाताप हुने गरेको बताउँदै आएका छन् ।
७ सियन कम्बस :
चर्चित ¥यापर सियन कोम्बसले ७ वर्षकै उमेरमा यौन सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरे । उनले १० वर्षकी युवतीसँग यौन सम्बन्ध राख्न खोजेका थिए । आफ्नो भर्जिनिटी उनले १३ वर्षकै उमेरमा गुमाए ।
८.डेमी मुर :
हलिउड अभिनेत्री डेमी मुर्रेले आफ्नो भर्जिनिटी १५ वर्षकै उमेरमा गुमाएकी थिइन् । उनका प्रेमी अरु कोही नभएर सियन कम्बस नै थिए । माथि उल्लेखित उनै कम्बस जसले ७ वर्षकै उमेरमा यौनको स्वाद चाख्न खोजे र १३ वर्षमा भर्जिनिटी गुमाए ।
खानेपानी आपूर्ति नहुँदा गाउँपालिकामा तालाबन्दी
ट्रिपरको ठक्करबाट दाजुभाईको ज्यान गयो !
डोटीमा चर्कियो आन्दोलन, राजधानी माग्दै हड्ताल
मिस एसइइको ग्राण्ड फिनाली आज